8 Siyaabaha Edit Your Lugood Music Library
8 Siyaabaha Edit Lugood Music
Sida adeegyada music tago, Lugood waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan. Ay taageerayaan brand Apple ah, oo ay ku jiraan malaayiin songs, waa adeeg downloads lambarka mid ka mid ah laga heli karo maanta online. On top of this, adeegga macaamiisha ku wareegsan Lugood waa halyeeyga. Qiimaha ma aha sare, oo aad ka heli doorasho ballaaran ee music waqti kasta.
Iyada oo maktabad weyn Lugood music, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad wax ka bedesho u heesaha, sida iyaga soo gaabiyey, isagoo intaa ku daray fanka album iyo wax ka badan. Hadda, waxaan ku tusi doonaa sida loo edit Lugood music hoos ku qoran.
Qeybta 1: music Cut
Qeybta 2: Ku dar tahay album in music
Qeybta 3: Ku dar lyrics
Qeybta 4: qas music
Qeybta 5: Edit info song
Qeybta 6: Edit playlist ah
Part7: sifayn Edit
Qaybta 8: Edit account Lugood
Mararka qaarkood, waxaan heysanaa music in aan rabaa in aan wax yar ka gaabin, maxaa yeelay, wuxuu la barwaaqaysan fiican hees xiga ee playlist ah.
Si aad u gooyay music, Isticmaal tallaabooyinka soo socda:
Fur Lugood iyo xaq guji song in aad rabto in aad ka gooyay. Markaas dooro 'aad u hesho info'.
Riix tab fursadaha dooro hal dhibic cusub galaya waqtiga daqiiqo iyo ilbiriqsi. Marka aad waxan ku samaysay eeg markii bilawdo 'sanduuqa.
Dooro endpoint cusub oo ay soo galaan waqtiga daqiiqo iyo ilbiriqsi oo sax ku sameeyo sanduuqa oo oranaya 'waqtiga stop'.
Midig u guji aad song dooro 'abuuro MP3 version' in la abuuro nuqul ka mid ah wadada dherer cusub.
Tani waxaa inta badan loo baahan yahay marka saaxiib siinayaa CD ah oo ay music jecel yahay oo aad rabto in aad leedahay qaar ka mid ah farshaxanka album, waxaa ka. Waxaan ku tusi doona sida ay u maareeyaan.
Shaqada ugu horreysa waa in la helo gal Lugood iyo heli album waa in aan farshaxanka.
Markaas guji song iyo rugtii hore shaqada iyo guji song la soo dhaafay si ay heesaha oo dhan liiska lagu muujiyey.
Marka aad xaq guji liiska cusub ee fursadaha ka socda si ay u muujiyaan ilaa iyo ikhtiyaarkaaga waa mid ka mid ah oo oranaya 'aad u hesho farshaxanka album'. Tani waa meesha aad ka heli guji farshaxanka album on box wadahadal shaashadda ka.
Waxaa laga yaabaa inaad ka heli farshaxanka album kuu keenay by Lugood ah. Waxa kale oo laga yaabaa in aad leedahay waxaa laga yaabaa in xaalad aad u baahan tahay in ay galaan farshaxanka gacanta.
Raadi image aad jeceshahay ka Google images ama wax la mid ah oo jiidi rogtid oo aad desktop, ka dibna dib ugu soo laabtaan heerarka bilowga ah ee liiskan, taas oo macnaheedu yahay helitaanka album iyo xulashada tareenka. Markan, halkii xulashada karaa farshaxanka album aad dooro 'aad u hesho info'.
Sanduuqa hadal A soo bixi doona shaashadda oo aad ku weydiin doonaan haddii aad rabto in aad wax ka bedel macluumaadka alaabta kala duwan. Riix 'haa'.
Sanduuqa kale oo wadahadal soo bixi doona oo kuu ogolaanaya in aad geli magacyada of farshaxanka, album iyo macluumaad kale. Waxa kale oo jira sanduuq halkan oo oranaya 'farshaxanka'. Tani waa meesha aad ka desktop-ka ku riday sanduuqa jiidi aad sawirka.
Markaasay aad u leedahay in la sameeyo oo dhan waa saxaafadeed 'caadi' si ay u buuxiyaan.
Dhibaatada kale ee aad leedahay waxaa laga yaabaa in marka aad la abuuro maktabadda music aad ku Lugood waxaa helo lyrics. Tani waa wax dadka guud ahaan laga walwalo.
Halkan walwal weyn ayaa ah in goobaha lyrics badan oo aan sax ahayn. On top of this, copyright dhigaya in aad had iyo jeer ma ka heli kartaa oo ay isticmaalaan lyrics aad rabto. Ugu wanaagsan ee ay garanayso u isticmaashay si ay u tagaan website-ka sarreeyey ciidankii ama artist aad dhagaysanayso, sababtoo ah dad badan oo farshaxan guutooyinkiisa oo qor lyrics ay internetka ee buuxa.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa lyrics on websites lyric gaar ah. Waxaa aad u fiican in ay isku dayaan oo ay helaan goob waa la taaban karo sida adkeeyey tirada sano. Qaar ka mid ah goobaha ku Sugantahay Internet iyo tagtay mar kale in dhowr toddobaad, dhibaatooyin copyright waajib labada la'aan xiiso. Raadi hareeraha iyo aad u hesho goob ugu wanaagsan ee ku haboon baahidaada. Qaabkan waxaad si deg deg ah ka heli doontaa lyrics.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa lyrics ee qoraalada ee CD-yada. Kuwani waxay jeclaan aadan ku jira oo dhan lyrics of songs ah oo inta badan ka mid ah iyo fanaaniinta guutooyinkiisa.
Run ahaantii Tani ma noqon karaan kuwo fudud. Dooro track ah oo guji info karaa.
Markaas guji tab ah lyrics. Halkan waxaad ka heli doontaa sanduuq weyn oo bannaan ah oo aad paste kartaa ama u qor lyrics ee song aad dooratay.
Haddii aad ka dibna riix OK on dib markii aad soo gashay lyrics ah, markaas ka dibna Lugood soo diri doonaa lyrics ay u qalab aad marka xigta ee aad synch aad telefoon iyo your computer. Waa mid fudud sida in iyo sida deg deg ah sida in.
Hadda waxaad arki kartaa sababta dad badan waxay door bidaan in ay kaliya paste lyrics ee ka websites in kastoo. Waxa wacnaan isku dayaya in ay helaan goobo u wanaagsan, sababtoo ah goobaha qaar ka mid ah waxay leeyihiin lyrics aan sax ahayn.
Isticmaalka playlists Lugood waa u fududahay, oo kuu ogolaanaya in aad isku shaandheyn ku songs on playlist ah si aad u abuuri karaan liiska caadadii heesaha oo aad jeceshahay. Si kastaba ha ahaatee, waxa kale oo aad qasan kartaa gabayo playlist si gudaa aad qabto ka maqnaa muddo ka yar inta u dhaxaysa kuwan raadkaygay. Halkan sida:
Marka aad leedahay playlist ah abuuray, guji "edit" sare ee shaashadda.
Dooro doorbidida, loo maqli karo, ka dibna songs cross-ka baxeysa.
Halkan, waxaad kordhin kartaa ama hoos u jeer fadeout u dhexeeya heeso.
Ka dibna waxaad ayaa si rasmi ah isku qasan aad music.
Eeg sida aad u samayn karaa hoos ku qoran:
Muujinta song aad rabto in aad wax ka bedel ay mar riixaya.
Isticmaalida "heli info" tab, xaalkaa info oo ku saabsan song aad dooratay. Tani waxay qaadatay dhawr ilbiriqsi, iyo waxay bixisaa noocyo kala duwan oo ku saabsan info music in aad shaqsi ahaan edit karaa.
The tab fursadaha kuu ogolaanayaa inaad si ay u xakameeyaan mugga horena gabayga ah, halka tab ah lyrics kuu ogolaanaya in aad nuqul oo paste lyrics.
Marka aad dhamaysid la tafatir ah, riix OK hoose ee suuqa kala.
Kuwa songs sacoto in aadan rabin in playlists mar dambe la qaadi karo daryeelka ee si fudud. Kaliya dooro playlist ka Murayaad amarka iyo wax miiran tirtirto ama backspace. Tani asagaa iska saari doona song, halka sidoo kale ilaalinta song ee maktabadda.
Si aad u tirtirto playlist ah oo dhan, kaliya waxa ay doortaan kadibna riix tirtirto. Waa mid fudud sida in.
Qaybta 7: sifayn Edit
Si aad xaalkaa ku sifayn, guji si aad music si ay kor u soo Bixiyaa wax info oo ku saabsan heesta. Xaqa riix halkan iyo menu a iman lahaa kor, oo ku sifayn waa ka muuqdaan shaashada. Hubi ku sifayn iyo liiska qaybaha iman lahaa kor u meel kasta oo muusiko ah ayaa si aad u doortay. Guji mid ka mid ah in uu yahay inta badan la xiriira xabbad aad gaar ah oo music.
La soco in aad piece of music aan ku habooneyn galay sifayn gaar ah (ma dhici) si ay diyaar u tahay in la helo ciyaar ku dhow halkii ay taam sax noqon.
Sidaa darteed si fudud ma noqon karaan kuwo Haddii aad rabto in aad beddesho qaar ka mid ah faahfaahinta ku saabsan Lugood aad. All inaad samayso waa:
Tag screen Home oo ka dhacay goobaha. Markaas guji Lugood iyo App Store.
Riix ID Apple oo markaas u arkaan ID Apple.
Haddii aad rabto in aad beddesho info lacagtaada, riix qaybta ku haboon.
A Guide Full on Sida loo Isticmaalo Lugood Home Sharing
> Resource > Lugood > 8 Siyaabaha Edit Lugood Music Library